UA : manofana momba ny fambolena | NewsMada
UA : manofana momba ny fambolena
Nifarana omaly any Addis-Abeba, Etiopia, ny fivoriana an-tampony ny Vondron’ny tany afrikanina (UA). Anisan’ny nibahan-toerana tamin’io fivoriana io ny fifantohana eo amin’ny fifanakalozana ara-barotra amin’ny samy firenena afrikanina. Nitondra fanazavana momba izany ny filoha Rajaonarimampianina Hery, nambarany fa “tombontsoa lehibe ho an’ny tany mpikambana, miisa 54, ny fifandraisana ara-toekarena sy ny fanalalahana ny toekarena aty Afrika”. Hifantohana amin’izany ny fanafarana sy fanondranana entana, fanalalahana ny fivezivezen’ny olona. “Noho izany, tsara ny hampivelarana ny sehatry ny famokarana ”, hoy ny filoha malagasy.
Tokony hamaritana politika vaovao ny fambolena, tsy misaraka amin’izany sehatra izany ny fametrahana fotodrafitrasa. Nasian-teny ireo nandritra io fivorian’ny UA io. Lalana iray ho fanatanterahana izany ny fanofanana arak’asa momba ny fambolena sy ny fiompiana, ho an’ny tanora. “Homen-danja ny tanora, izay tombontsoa lehibe ho antsika ny fananana azy ireo maro. Koa fanamby hapetratsika ny fanabeazana sy fanofanana arak’asa ho azy ireo, hisorohana ny tsy fananana asa” hoy ihany ny filoha malagasy.
Vahaolana ny angovo azo havaozina
Lohahevitra iray lehibe nifampidinihana koa ny famatsiana angovo. Vahaolana, ny fitrandrahana angovo azo havaozina. Manokana tetibola ho an’izany ny UA ; vonona hanampy koa ny firenen-kafa, toa an’i Etazonia. Loza mitatao na efa mihatra amin’ny tany maro, toy ny eto an-toerana, ny fahapotehan’ny tontolo iainana noho ny tsy fisian’ny herinaratra. Miainga avy amin’ny politika ara-toekarena eto an-toerana ny fanatanterahana izany ; antenaina ho tombontsoan’ny samy mpikambana ny fiverenan’i Maraoka ao anatin’ny Vondrona afrikanina. Voafidy ho filohan’ny Vondrona afrikanina, taona 2017, ny filohan’i Ginea, i Alpha Condé.